सवा खर्बमा इन्धन भण्डारण ! Bizshala -
सवा खर्बमा इन्धन भण्डारण !
काठमाण्डौ । नेपाल आयल निगमले प्रक्रिया अघि बढाएको पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारणगृह निर्माण गर्न र त्यसमा राख्ने इन्धन खरिद गर्न सवा खर्ब रुपैयाँ खर्च हुने भएको छ।
निगमले तीन महिनासम्म पुग्ने गरी पेट्रोलियम पदार्थ सञ्चित गर्न भण्डारणगृह बनाउन लागेको हो।
निगमका निमित्त नायव कार्यकारीनिर्देशक सुशील भट्टराईका अनुसार प्रादेशिक संरचनाअनुसार बनाउन लागिएको नयाँ भण्डारणगृहमा पेट्रोल एक लाख २९ हजार आठ सय १६ किलोलिटर, डिजेल तीन लाख ६२ हजार ६ सय किलोलिटर, हवाईइन्धन ५१ हजार पाँच सय किलोलिटर र खाना पकाउने एलपी ग्यास एक लाख १३ हजार मेट्रिक टन भण्डारण गरिनेछ। तरल अवस्थाको इन्धन भण्डारणगृह निर्माण गर्न जग्गाबाहेक २० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने खाका तयार गरिएको छ।
यसैगरी निर्माणपछि भण्डारणगृहमा इन्धन खरिद गरी मौज्दात राख्न ४८ अर्ब रुपैयाँ लाग्नेछ। ग्यासको भण्डारणगृह निर्माण गर्न जग्गाबाहेक करिब ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने योजना तयार गरिएको छ। निर्माणपछि भण्डारणगृहमा ग्यास खरिद गरी मौज्दात राख्न नौ अर्ब रुपैयाँ लाग्नेछ।
भण्डारणगृह निर्माण गर्न थप १० अर्ब र तीन महिनाका लागि इन्धन खरिद गरी भण्डारण गर्न कुल एक खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने निगमले जनाएको छ।
'निगम एक्लैले आगामी १० वर्षभित्रमा स्वचालित मूल्य प्रणालीमार्फत कारोबार गर्दा वार्षिक मुनाफा हुने कारोबारको रकममध्ये १० देखि १५ प्रतिशत मात्रै राख्ने हो भने भण्डारणगृह निर्माण गर्न र इन्धन खरिद गरी मौज्दात राख्ने सम्पूर्ण रकम उठ्नसक्ने अवस्था छ', भट्टराईले भने, 'निर्माणखर्च उठाउन अर्को पनि विकल्प छ। निगमको मुनाफा कम गरी सरकार र निगमले आधाआधा रकम बेहोर्दा पनि भण्डारणगृह निर्माण गरी इन्धन खरिद गरी मौज्दात राख्न सकिन्छ।'
चालू आर्थिक वर्षमा निगमले भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि करिब सात अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ। प्रादेशिक संरचनाअनुसार प्रदेश नम्बर एकमा ९२ हजार चार सय ६५ किलोलिटर, प्रदेश नम्बर दुईमा ८१ हजार पाँच सय ८७, प्रदेश नम्बर तीनमा दुई लाख १७ हजार पाँच सय ६६ किलोलिटर, प्रदेश नम्बर चारमा ३२ हजार ६ सय ३४ किलोलिटर, प्रदेश नम्बर पाँचमा ९७ हजार नौ सय चार किलोलिटर, प्रदेश नम्बर ६ मा पाँच हजार पाँच सय र प्रदेश नम्बर सातमा २१ हजार सात सय ५० किलोलिटर क्षमताको इन्धन भण्डारणगृह निर्माण हुनेछ।
निगममा सरकारको ९८.३७ प्रतिशत, नेपाल राष्ट्र बैंकको ०.२३ प्रतिशत, नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडको ०.७८ प्रतिशत, वाणिज्य बैंकको ०.१५ प्रतिशत र राष्ट्रिय बिमा संस्थानको ०.४७ प्रतिशत सेयर छ। निगमसँग जारी पुँजी ३० अर्ब छ भने चुक्ता पुँजी नौ करोड ६९ लाख रुपैयाँ छ।
अवरोधबिना निर्माणकार्यले गति लियो भने आगामी एक वर्षपछि यो भण्डारणगृह तयार हुनेछ। यो भण्डारणगृह निर्माण भएपछि हडताल, नाकाबन्दी र सडक अवरुद्ध भएर इन्धन आपूर्ति नभए पनि नेपाली उपभोक्तालाई तीन महिनासम्म इन्धनको कुनै अभाव नहुने आपूर्ति मन्त्रालयको दाबी छ। हाल निगमसँग पेट्रोलको भण्डारणक्षमता पाँच हजार एक सय ८४ किलोलिटर, डिजेलको ४२ हजार चार सय किलोलिटर, मट्टीतेलको १५ हजार पाँच सय र हवाईइन्धनको आठ हजार पाँच सय किलोलिटर छ।
खाना पकाउने एलपीजी ग्यासको भण्डारण गर्ने क्षमता निजी क्षेत्रसँग मात्रै छ। निजी क्षेत्रसँग सात हजार मेट्रिक टनको क्षमता छ। यो खबर आजको अन्नपूर्णपोष्टमा छापिएको छ ।
print media nepal oil corporation
इलाम। इलाम र पाँचथरको सिमानामा पर्ने राँके बजारबाट मासिक ६०...
अब स्ल्याब ढलानबिना पनि घर बन्ने, चीनको सफल प्रविधि नेपालमा !
काठमाण्डौ । घर बनाउँंदा स्ल्याब ढलान गर्नैपर्ने बाध्यता नहुने भएको...
पुसमा हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो, ३०० बढी स्टल रहने
काठमाण्डौ । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल र एक्स्पो...
काठमाण्डौ । सरकारले पछिल्लो एक वर्षमा मात्रै ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा...
पूर्वराष्ट्रपतिलाई मासिक दुई लाख घरभाडा !
काठमाण्डौ । काठमाडौंमा घर नहुने पूर्वराष्ट्रपतिलाई मासिक दुई लाख र...
काठमाण्डौ । शुक्रबार राति १२ बजेदेखि निर्वाचन आयोगले जारी गरेको...
नेपालको वृद्धिदर ४.५% मा सीमित हुने विश्व बैंकको प्रक्षेपण !
काठमाण्डौ । नेपालको आर्थिक वृद्धिदर अपेक्षित र प्रक्षेपित दर भन्दा...
कर्मचारीले राजनीति गरे ‘बर्खास्त' !
काठमाण्डौ । कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिकरण हाबी भएको गुनासो...